१७ म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन पाउने हल्लापछि मेनपावर व्यवसायी आतंकित « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
१७ म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन पाउने हल्लापछि मेनपावर व्यवसायी आतंकित
गुरुङ नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टर सञ्चालक तथा एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हुन् ।
थाहा अनलाइन November 5, 2020 मा प्रकाशित
काठमाडौं । आफ्नो देशमा कामदार पठाउन अनुमति दिनेगरी कतारले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सर्टलिस्ट गरेको हल्ला बजारमा फैलिएको छ । कतारले छनौट गरेका म्यानपावरको नाम भन्दै १७ वटा कम्पनीको लिस्ट सार्वजनिक भएको हो । यो खबरपछि म्यानपावर क्षेत्रमा हंगामा मच्चिएको छ ।
कतारको भिसा स्वीकृत गर्ने निकाय कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) ले ती म्यानपावर कम्पनीको नाम सर्टलिस्ट गरेको भनिएको छ । नेपालस्थित कतारी दुतावास र नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टरले पठाएको नामलाई कतार भिसा सेन्टरको मुख्यालयले स्वीकृत पठाएको भनिएको छ ।
सार्वजनिक भएको म्यानपावर कम्पनीको सूचीमा होप इन्टरनेशनल, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राज ओभरसिज, अल–रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावर, न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज प्रालि साउण्डलिनेस रिक्रुमेन्ट प्रालि, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट प्रालि रहेका छन् ।
यसरी सिन्डिकेट कायम गर्नुमा २ जना म्यानपावर व्यवसायी सक्रिय भएको अरु व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीे हेमबहादुर गुरुङ र महेन्द्र चौलागाइँमाथि यस्तो आशंका गरिएको छ । उनीहरुकै पहलमा यसरी सिन्डिकेट गर्ने प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ । गुरुङ नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टर सञ्चालक तथा एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हुन् ।
क्युभीसीले कतार जाने नेपाली कामदारको फिङ्गरप्रिन्ट लिने र भिसाको प्रोसेसिङमा सहजीकरण गर्ने काम गर्छ । महेन्द्र चौलागाइँ भने हाल कतारमा बस्छन् । उनी पनि म्यानपावर व्यवसायी भएको जनाइएको छ । उनका भाई प्रेम चौलागाइँले हाल न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका छन् जुन सर्टलिस्टमा परेका १७ वटा म्यानपावरमध्ये एक हो ।
यो सिन्डिकेटलाई सार्थक बनाउन कतारमा बसेर छलफल र बैठकमा चौलागाइँले भूमिका निर्वाह गरेको स्रोतको दाबी छ । तर क्युभिसी नेपालका सञ्चालक समेत रहेका हेमबहादुर गुरुङले आफूले यो लिस्ट प्राप्त गरेको भन्दै यसमा आफैं अचम्ममा परेको बताए । ‘साथीहरुले मलाई पनि यो लिस्ट पठाउनु भयो । म त आफैं अचम्ममा परेँ । यो लिस्ट कसले बनायो ? कसले पठायो ? मलाई त केही थाहा छैन’ । गुरुङले भने, ‘क्युभीसीले त भीसाको सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । यस्तो हल्ला कसले चलायो भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।’
पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रालिका अध्यक्ष प्रेम चौलागाइँले पनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘नेपालस्थित कतारी दुतावास र क्युभीसीले नाम पठाएको हुनसक्छ, यसबारे मलाई केही थाहा भएन’ अध्यक्ष चौलागाइँले भने । कतारको रोजगारीमा सीमित म्यानपावरको सिन्डिकेटको प्रयास भएको हल्लापछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सशंकित बनेका छन् ।
यही विषयमा छलफल गर्न व्यवसायीहरुको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघको कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे लगायत सहभागी थिए । बैठकले बजारमा आएका हल्लाको आधिकारिकता पत्ता लगाउने र सही रहेछ भने यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष गैरेले बताए ।
गैरेले यसबारे सर्टलिष्टमा नाम आएका म्यानपावर व्यवसायीसँग पनि आफूले कुरा गर्ने बताए । ‘मैले हेमदाई (क्युभीसीका सञ्चालक) सँग कुरा गरिसकेको छु, उहाँले यो हल्ला मात्रै हो, म कुनै पनि सिन्डिकेट गर्दिन भन्नुभएको छ । अरुसँग पनि कुरा हुन्छ । सिन्डिकेट हुन कुनै पनि हालतमा दिइँदैन ।’
फ्रि भिसाको विवादका कारण मलेसियाको रोजगारी चौपट भएपछि कतार अहिले नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको छ । हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त सबै म्यानपावर व्यवसायीले कतारमा कामदार पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । हाल ८ सय ५४ वटा म्यानपावर व्यवसायीले यस्तो स्वीकृति पाएका छन् । प्रमुख रोजगार गन्तव्यमा नै सिन्डिकेट हुन लागेको हल्लाले उनीहरु आतंकित बनेका हुन् ।